Ihowuliseyili ABS/PMMA/TPO/EVA Ibhodi Extrusion Line Manufacturer kunye noMboneleli | INGQWELELI
I-ABS sheet extrusion line eyenziwe yiChampion Machinery ingaqhubeka nokuvelisa i-multi-layers sheet / ibhodi yokusetyenziswa kwemveliso eyahlukeneyo. Iminyaka engama-25 yamava kushishino lweplastiki extrusion. Umenzi waseTshayina.
Esebenza kakhulu isikrufu esinye co-extruder
Isakhiwo somaleko wephepha
Iphepha elinye, A/B/A, A/B/C, A/B
Uluhlu lobukhulu bephepha
Iinzuzo ze-ABS / EVA umatshini webhodi extrusion
ABS sheet co-extrusion line eyenziwe Champion Machinery unako ngokuqhubekayo ukuvelisa I-multi-layers sheet / ibhodi kwimveliso yokusetyenziswa eyahlukileyo.
I-Champion brand high-efficiency single screw extruder yemathiriyeli nganye, imveliso enkulu yomthamo, uxinzelelo olusebenzayo oluzinzileyo.
Uhlobo oluthe nkqo umatshini wekhalenda we-roller wokwenza ibhodi, uxhotyiswe ngesilawuli sobushushu esizimeleyo. Ulawulo lobushushu ±1℃
I-edge cutter esuswayo kunye nomgama ohlengahlengiswayo.
Umatshini wokusika we-Chipless, ukulawula ubude obuchanekileyo.
Iimpawu zemveliso kunye nesicelo
Idityaniswe yi-ABS kunye ne-PMMA okanye enye i-resin, iphucula ukusebenza kwemveliso, enjengokumelana nempembelelo enamandla, i-gloss ephezulu, ine-vacuum efanelekileyo yokubumba, ubushushu obuphezulu kunye nokumelana nobushushu obuphantsi, ukuxhathisa ukunxiba, ukumelana nokugqwala kunye nokusebenza kakuhle komatshini.
I-ABS kunye ne-PMMA co-extrusion, ngokuqhelekileyo isetyenziselwa ibhafu, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlamba, igumbi lomphunga, njl.
Ibhodi ye-ABS skin-grain, ibhodi ye-ABS engaphantsi egudileyo yesikhumba, ibhodi ebuyisela ilangatye, idla ngokusetyenziselwa uphahla lwemoto / iibhasi, ideshibhodi yemoto, isakhelo sefestile yeemoto, kunye neesutikheyisi zokuhamba, iibhegi, njl.
Ibhodi ye-TPO / EVA ngu-CHAMPION ABS / EVA / TPO umgca we-extrusion weshidi, kunye nokusebenza kakuhle njengokumelana nokuguga, ukuxhathisa kwamanzi, ukuxhathisa kwe-corrosion, ukumelana ne-ultraviolet ray, ukuguquguquka okuhle, ubomi benkonzo ende, njl. , ukugqunywa kwesandi, ibhokisi yomsila wemoto, iifenda, ingaphakathi lemoto kunye neendawo zokuhombisa zangaphandle, njl.
Ibhodi yokuhombisa ibhodi ye-extrusion line-EVA sheet extrusion line
SIEMENS PLC ulawulo lwedijithali. SIEMENS top series CPU.
Xhobisa i-SIEMENS frequency, i-servo yokuqhuba inxalenye yomatshini opheleleyo weshiti. Ngokusebenzisa ikhonkco yenethiwekhi yeProfinet, inkqubo yokulawula inokuthenjwa ngakumbi, izinzile kwaye isebenza kakuhle.
Ngolawulo oluphakathi, ungakhangela lonke ulwazi lwazo zonke iindawo kwiscreen esinye, njengangoku, uxinzelelo, isantya, ubushushu, njl njl. Ukusebenza kulula.
Ukuxilongwa kwesiphoso esikude kunye nokugcinwa kude kunokubonwa ngamakhonkco e-ethernet. Kukulungele ngakumbi ukusombulula iingxaki emva kokuthengisa.
Ngaphambili: PC/PP/PE Hollow Sheet Extrusion Line
Okulandelayo: I-PMMA/GPPS i-Optical Sheet Extrusion Line